septembre 2012 – filazantsaramada
INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA? Nomen’Andriamanitra Ray safidy ny olona ny amin’izay tokony hivavahany. Misy ny mivavaka amin’andriamanitra tsy fantatra, ao ny mivavaka amin’ny masoandro, amin’ny volana, amin’ny kintana, amin’ny razana, amin’ny fanahy tsy fantatra. Fa ny Soratra Masina kosa dia mitaona ny olona hivavaka amin’ Andriamanitra Ray Mpahary, ary amin’ny Anaran’i Jesosy Kristy no […]
Publié parfilazantsaramada septembre 28, 2012 septembre 26, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA?
Anisan’ny Akany fitaizana tanora miara-miasa @ F.F ny Akany Fifampandroasoana Ambodin’Isotry @ alalan’ny fandefasana Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra. Ho famaranana ny taom-pianarana 2011/2012 izay iarahana mitaiza sy manabe ireo zatovovy miisa 50 eo ho eo dia ny “film” mitondra ny lohan-teny “Aoka izay, mandehana amin’ny fitiavana” no niarahana tamin’izy ireo. Tantara maneho ny herisetra mahazo ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 24, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny Feon’ny Filazantsara sy ny Ankany Fitaizana Tanora
Tontosa soa aman-tsara ny Zaikabe faha-5 ny FIFIL izay natao tany amin’ny Synodam-Paritany Boeny Mahajanga (SPBM) ny 6- 12 Aogositra 2012 lasa teo. Fotoan-dehibe iray ho an’ny Sampana Fifohazana eo anivon’ny Fiangonana Loterana izay tanterahina isaky ny 3 taona izy ity. Nasaina nandray anjara fitenenana ho fampahafantarana sy fanentanana mikasika ny Feon’ny Filazantsara sy ireo […]
Publié parfilazantsaramada septembre 24, 2012 octobre 3, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miasan’ny Firaisan’ny Fifohazana Loterana Malagasy (FIFIL) sy ny Feon’ny Filazantsara
« Ataovy mpianatro ny firenena rehetra »
Toy ny fanao isan-taona dia nanantanteraka “Veillée de prière” ny Zoma 24 Aogositra ireo mpianatra ao @ Association des Etudiants en Médecine Vétérinaire de Madagascar Ambatobe (A.E.M.V.M :Commission Spirituelle). Nanomboka tamin’ny 7 ora alina ary nifarana t@ 5 ora maraina ny fiaraha-mivavaka. Ny Feon’ny Filazantsara (F.F) no nitarika ny fotoam-pivavahana, Pastera 3 (avy @ Fiangonana FJKM, […]
Publié parfilazantsaramada septembre 24, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur « Ataovy mpianatro ny firenena rehetra »
« Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’ Andriamanitra? » Jaona 11:40, hoy tokoa mantsy i Maria tamin’ny maty i Lazarosy anadahiny, « Tompoko, maimbo izy izao », satria Jesosy niteny mba hanesorana ny vato. Nino i Maria fa afaka nanasitrana an’i Lazarosy i Jesosy, fa tsy nino kosa izy fa afaka nampitsangana […]
Publié parfilazantsaramada septembre 21, 2012 septembre 21, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA
NY FIEREMAN’NY OLONA, NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA “Fa fantrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanankarena anareo ny alahelony” (2 Korintiana 8: 9) Ny mpanoratra iray, antsoina hoe Lillian Hellman, ao anatin’ny tantara an-tsehatra iray izay nampitondrainy ny lohateny hoe The little Foxes (na ‘ireo […]
Publié parfilazantsaramada septembre 15, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIEREMAN’NY OLONA, NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA
» Ary hoy kosa Jesosy taminy: Hataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe: « Mpanao fanafody, sitrano ny tenanao »: izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin’ny taninao koa. Ary hoy koa Izy: lazaiko aminareo marina tokoa: tsy misy mpaminany ankasitrahana ao amin’ny taniny » Lioka 4:23-24 Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotana nataon’Andriamanitra […]
Publié parfilazantsaramada septembre 7, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotany.
« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » Jaona 13:34 Ny Teny tonga nofo dia marika fa Andriamanitra mihitsy no nanetry tena ho eo anivontsika. Tamin’ny Solomona nanorina ny trano ho an’i Jehovah dia niteny hoe, Andriamanitra va hianao ka honina ety antany tokoa? […]
Publié parfilazantsaramada septembre 1, 2012 septembre 1, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Tiava: Didy Vaovao